Anogadzira mimhanzi: Ita-I-Iwe Pamoyo Studio, Yekushambadzira Vhidhiyo Edhiyo, uye Vhidhiyo Ad Anovaka | Martech Zone
Mifananidzo yehupenyu uye inorarama inofanirwa kune ese masangano. Mavhidhiyo ari kuita zvakanyanya, anokwanisa kutsanangura akaoma pfungwa muchidimbu uye nekupa chiitiko chinoonekwa uye chinonzwika. Ipo vhidhiyo iri yepakati isinganetsi, inowanzo gomarara kumabhizimusi madiki kana vashambadziri nekuda kwezviwanikwa zvinodiwa:
Professional vhidhiyo uye odhiyo michina yekurekodha.
Nyanzvi yezwi pamusoro pezvinyorwa zvako.
Unyanzvi hwemifananidzo uye mifananidzo yekuisa.
Uye, pamwe, iyo inodhura uye yakakosha sosi - yehunyanzvi yekugadzirisa yeyakaitika.
Nhau huru ndeyekuti isu tinoramba tichiona kufambira mberi - zvese mune zvemahara uye software. Iyo yemazuva ano foni inogona kurekodha yakanaka vhidhiyo mune dzakapfuma 4k resolution. Wedzera maikorofoni isingadhuri uye odhiyo yako inozadzisa zvinoonekwa. Layer mune intros, outros, mimhanzi, zvinoonekwa, kana kunyangwe zvinyowani uye iwe unogona kuve neanobudirira zvemukati yekutengesa chidimbu pasina kutyora bhangi.
Anogadzira Mhuka yeMhuka uye Editing Platform
Anogadzira dhonza-uye-kudonha muvaki zvinoita kuti zvive nyore kune chero munhu kugadzira pro-level animated mavhidhiyo achishandisa akafanogadzirwa matemplate uye akagadzirira-kuenda-kuenda zvinhu zvine zero hunyanzvi hunyanzvi. Iyo chikuva chakavakirwa vanhu vamwechete kana zvikwata kuvandudza chero mhando yevhidhiyo.
Vashambadziri vari kushandisa Animaker yekutarisa kwechiratidzo, mavhidhiyo ekutsikirira, mavhidhiyo ekutsanangudza, mavhidhiyo akatsanangudza, mavhidhiyo ekuratidzira, humbowo hwevatengi, mharidzo dzebhizinesi, kushambadzira kwevhidhiyo, masiraidhi, Instagram mavhidhiyo, Facebook mavhidhiyo, uye mavhidhiyo eYouTube nemavhidhiyo ads.
Chimwe chezvakanakisa maficha ndechekuti Animaker inokutendera iwe kudzosera yako vhidhiyo pamapuratifomu akasiyana nyore. Simply tinya pane saizi bhatani uye chinja pakati akasiyana vhidhiyo mhando ipapo ipapo.
Heano mamwe ezvimwe zvinoshamisa maficha uye mashandiro:
Anogadzira studio yeanogadzira anoita kuti iwe ugadzire uye ubudise yako vhidhiyo yehupenyu neese maturusi anodiwa:
Hunhu Kuvaka - Une pamusoro pezve gumi neshanu maficha ekugadzirisa uye anopfuura gumi zvishongedzo, inovaka hunhu hwaunoda uye zvinonhuwira mavhidhiyo ako!
Hunhu Chiso Chiso - Iine anopfuura makumi maviri echiso kumeso, Anogadzira anobatsira kuunza ako mavara uye mavhidhiyo kuhupenyu.
Auto Lip-Kubvumirana - Wedzera mazwiovers kune ako mavara uye uatarise ivo vachitaura ne auto lip-sync. Haufanire kushandisa nguva uchimutsiridza miromo yemunhu.
Smart Kufambisa - Vanyaradzi vanopedza vangangoita makumi masere muzana yenguva yavo zvinhu zvipenyu kufamba kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe. Uye isu tafunga kukusevha nguva nesimba. Rarama mimhanzi yakaoma kushandisa Smart Movha nekungobaya bhatani.
Gadzira Yako Yekutanga Nyowani Zvino!
Isa bvunzurudzo yako, chipupuriro, kana imwe vhidhiyo yakanyorwa uye animaker inopa matani ezvinhu zvakadai semhedzisiro yekamera, mhedzisiro, mamatepi edhiyo, shanduko, uye zvimwe kuwedzera pro-level kunzwa kune yako vhidhiyo.
Urarame Vhidhiyo Kugadziridza uye 4K Vhidhiyo Yemhando - Sarudza, teerera, uye gadzirisa mavhidhiyo ese munzvimbo imwechete. Mugadziri anoita kuti iwe ubude pachena neakachena 4K emavhidhiyo emhando.
Subtitle Vhidhiyo yako - NaAnmaker, iwe unogona nyore pasi pemavhidhiyo ako kuti agadzirire iwo ese mapuratifomu.
Kupfuura Mavhidhiyo nekudzvanya - Wovhara mavhidhiyo ane zvinyorwa, mifananidzo, zvimiti, uye zvimwe.
Watermark Yako Yemukati - Nyore tora logo yako kumavhidhiyo ako uye maGIF newako watermark.
Masheya eSheya - Anopfuura mamirioni zana efaeti ekushandisa kwako. Raibhurari yeAnmaker inosanganisirwa neiyo yeGetty yekusununguka kwekuwana iyo yakanaka mufananidzo kana vhidhiyo yeprojekiti yako!
Imba Yemahara-Yemahara uye Mhedzisiro Mhedzisiro - Mugadziri iwe wawakafukidzira pamberi penzwi neanopfuura zana emimhanzi maturu uye zviuru zvemhedzisiro muraibhurari yedu odhiyo.
Gadzira Yako Yekutanga Vhidhiyo Zvino!
Mhuka yeGIF uye Pfupi Vhidhiyo Musiki
Mhuka dzeGIF dzakanakisa pasocial media uye email kushambadzira ... Raibhurari yeAnmaker inosanganisirwa neGiphy kuti ive nyore kuwana GIF yakakwana yeprojekti yako!
Gadzira Yako Yemhuka GIF Izvozvi!
Kubatana uye Brand Management
Koka vaunotamba navo mubhodhi kuti vashande pamwe chete pakuzadzisa mavhidhiyo enyu. Anogadzira mhuka anopawo kit yemhando kuti uve nechokwadi chekuti brand yako kuvimbika kunochengetwa kuenderana mune ese mavhidhiyo auri kutsikisa.
Vhidhiyo Kushambadzira Karenda
Vashandisi izvozvi vanowana vhidhiyo yekushambadzira khalenda izere neyekuita yevhidhiyo mazano ekubatsira iwe kuronga nekugadzira mavhidhiyo ezve ese akakosha mazuva mukati megore. Ingo famba uchienda kuchikamu chine mwedzi uno semusoro waro uye iwe unenge uine matani evhidhiyo yemavhidhiyo zvemukati mazano ekusimbisa hukama hwako hwevanhu.
AI-Inotungamirwa Izwi Overs
Ipuratifomu yacho inosanganisira izwi-pamusoro pehungwaru kugadzirisa uye kuburitsa yako script pasina kudiwa kwekuhaya tarenda. Inzwi reMakeraker rinokugonesa ku:
Sevanhu-senge Izwi Pamusoro - Nyore shandura chinyorwa chako kana script kune yemhando yepamusoro yemunhu-senge izwi pamusoro.
Kutungamira Kwenzwi Kudzora - Wedzera toni, kumbomira, kana kusimbisa kune chero izwi rakasarudzwa. Iwe unogona kunyange kuita kuti izwi rizeveze kana kufema.
Mitauro mizhinji Sarudzo - Gadzira izwi-pamusoro pemavhidhiyo ako mumazwi makumi mashanu + nemitauro makumi maviri neshanu.
Gadzira Voiceover Izvozvi
Kuzivisa: Ndiri mubatanidzwa we animaker uye vane hukama hwavo muchinyorwa chino.
Tags: aiai izwi-pamusoroai voiceoveranimatoranimated gifkuchangamukastudio studioDragora uye udonesezvimweshandura vhidhiyostock animationstock vhidhiyovhidhiyo kubatanavideo editingvhidhiyo yekushambadzira karendavhidhiyo kuburitswavhidhiyo studiomavhidhiyo matemplateizwiizwi pamusoro
Nzira yekudzivirira sei maInjini ekutsvaga kubva kuKutsvaga WordPress